महिलाले पुलिस बोलाएर खोलिन् ४२ वर्ष पुरानो डरलाग्दो रहस्य, पुलिसलाई पत्याउनै गाह्रो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
महिलाले पुलिस बोलाएर खोलिन् ४२ वर्ष पुरानो डरलाग्दो रहस्य, पुलिसलाई पत्याउनै गाह्रो
एजेन्सी। इङल्याण्डमा एक वृद्ध महिलाले केही समयअघि पुलिसलाई फोन गरिन् र बताइन् कि उनले सन् १९७६ मा एक व्यक्तिको हत्या गरेकी थिइन् र लाशलाई जमिनमा गाडेकी थिइन् । यति हुँदा पनि पुलिसले महिलालाई पक्राउ भने गरेन । महिलाको उजुरीपछि पुलिसले केस रि–ओपन गरेको थियो तर कुनै प्रमाण पाउन सकेन । यहाँसम्म की पुलिसलाई त महिलाले बताएको कहानीमा पनि शंका छ । पुलिसले ती महिलाले पब्लिसिटीको लागि यो सब गरेको बताएको छ महिलाले भने आफ्नो दावी सत्य भएको बताएकी छिन् ।
इङल्याण्डको न्यूमिल्स शहरकी ६८ वर्षकी जेनेट होल्ट नामकी महिलाले पुलिसलाई फोन गरेर आफूले गरेको अपराध सुनाएकी हुन् । उनले लाश खेतमा गाडेको बताइन् । महिलाका अनुसार त्यतिबेला उनका बिजनेस पार्टनर फ्रेड हेंडफोर्डने उनलाई दुई पटक बलात्कार गरेका थिए । त्यसपछि महिलाले उनलाई गोली हानेर मारेकी थिइन् । तर, घटनापछि उनको लाश कहिल्यै भेटिएन र उनले आत्महत्या गरेको मानियो ।
महिलाले आफूले यो कुरा पूरै बिर्सिसकेको तर अहिले साइक्लोजी थेरापी गरेपछि उनलाई सबै याद आएको बताइन् । जेनेटको उजुरीपछि पुलिसले केस रि ओपन गर्यो । महिलाले बताएको ठाउँमा खनेर पनि हेरियो तर लाशको अवशेष भेटिएन । महिलाको दावीअनुसार त्यहाँ १९८० को दशकमा पाइपलाइनको लागि खाल्डो खनिएको थियो । त्यही खाल्डो खन्दा निस्किएको माटोमा लाश पनि गएको हुन सक्ने उनको दावी छ ।
१९७६ मा फ्रेड रहस्यमय तरिकाले हराएका थिए । पुलिसले उनलाई निकै खोज्दा पनि केही भेटिएन । जाँचको क्रममा एक जनाले फ्रेडले आफूलाई कोइलाको खानीमा हाम्फालेर आत्महत्या गर्ने बताएको बयान दिए । त्यसपछि यही बयानको आधारमा केस बन्द गरिएको थियो । पुलिसले आर्थिक समस्याका कारण उनले आत्महत्या गरेको अनुमान गरेको थियो । अहिले जेनेटको दावीपछि पुनः अनुसन्धान गरेको पुलिसले जेनेटको दावी झुटो भएको दावी गरेको छ ।